ianao eto: Home endrika Treatments Light make-up ho volontsôkôlà maso
Brown-maso ankizivavy tsy afaka manitatra hatao hoe sambatra indrindra, satria ny ankamaroan'izy ireo mijery manaitra sy manintona na dia tsy misy makiazy. Raha mijery akaiky fahazavana make-up ho volontsôkôlà maso, atao amin'ny matihanina make-up mpanakanto, Izany no mora voaresaka fironana hafa - dia ihany no takiana, mba hanamafisana ny fahamendrehan'ny ny angona natiora, ary tsara, ankapobeny, Efa riveted ny maso.
Ny voajanahary aina ny volontsôkôlà-maso manome hatsarana maivana matoatoa. Na izany aza, dia ny loko mamirapiratra eo amin'ny maso volontany mijery matetika mora, noho izany mety ho mora meykapa. Na izany aza, ny mainty maso tsy mitovy: hiala amin'ny mazava ho efa ho mainty. Tompon'ny fahazavana-volontsôkôlà palitao aloky ny manga sy ny volomparasy hues, ny ankizivavy miaraka amin'ny maizina maso volontany dia soso-kevitra mavokely sy mamirapiratra hafa loko ny aloka.
Fampiharana teknika makiazy mora ho an'ny maso volontany miankina amin'ny lafin-javatra maro, anisan'izany ny anjara toerana manan-danja nilalao ny hoditra karazana. Raha ny hoditra no fijeriny - maizina, amin'ny ara-batana make-up dia ny mampiasa ny matte aloka miloko tanora ankamaroan'ny matoatoa va no. Fatin'ireo dia mila hisambotra bebe kokoa, ary tsy valahara. Raha ny hoditra dia mamirapiratra, dia tokony hifantoka amin'ny feo mazava eto an-tany, ohatra, haran-dranomasina, kafe na paiso.
Mba hampifanaraka ny hoditra feo, raha misy toy izany ilaina, dia tokony hampiasa concealer, izay manaisotra redness na podglaziny. Vovoka dia tsy tokony ho ampiasaina amin'ny rehetra, araka izany dia hanome hoditra tsy ara-dalàna, hanantitranterana na dia ny kely indrindra ketrona.
Dingana fampiharana ny makiazy:
ny hanomboka hampihatra ny aloka maivana kokoa aloky ny hodi-maso rehetra mampihetsi-po;
Avy eo dia nisy fotsy na milky loko, ny faritra ambany amin'ny handriny sy ao anatiny vazan-maso;
aloky maivana feo ny mpivady voafantina ho an'ny meykapa ampiharina manify Kisochka teny an-ciliary sisin'ny (soso-kevitra, ny alokaloka nandrakotra ny ampahatelon'ny Zato Taona Izay no Rolling ambonin'ny);
loko mainty no ampiasaina ho toy ny Liner ho mora fifantenana ny faritra ivelany ny maso sy ny ambany sarony.
Raha ny mascara, ny fahazavana make-up ho volontsôkôlà maso Matetika dia tafiditra indrindra ny fampiasana ny mainty. Brown mijery voajanahary maro, amin'ny maizina maso mora very. Touche fangatahana iray sosona, ary amin'ny zhelaenie manao fluffy kapoka alohan'ny fampiharana mascara dia afaka ny ho vovoka kely mangarahara vovoka.
Izany rehetra. Natural ka hanao-vonona. Dia mitoetra ihany no nankafy ny hatsaran 'ny natiora.